Masjidni Aliif kan magaalaa Finfinnee aanaa Laaftootti argamu diigame - NuuralHudaa
Masjidni Aliif kan magaalaa Finfinnee aanaa Laaftootti argamu diigame
On Aug 8, 2019 7
Masjidni Aliif, magaalaa Finfinnee aanaa Laaftoo araddaa 01 Veroonikaa riil Isteet dubbatti argama. Sababa Kaartaa hin qabu fi ijaarsa seeraa alaa jedhuun guyyaa har’aa Masjidni kun qamoolee bulchiinsa aanichaa irraa ergamanii fi poolisootaan kan diigame tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kanaan dura ‘manneen amantaa waraqaa hayyama lafaa hin qabne akka hin diigamne! Hanga kallattiin kaahamuu tarkaanfiin kamiyyuu akka irratti hin fudhatamne’ ajaja jedhu dabarsee ture. Ajaja kana jiddugala godhachuun hawaasni Muslimaa naannicha jiran ‘diigamu hin qabu’ jechuun falmatan, poolisootaan reebamuu Odeeyfannoon ni addeessa.
Dhimmichaan wal qabatee namoonni hedduunis hidhamuun beekameera.
FinfinneeMajliisa Magaalaa Finfinnee
May 20, 2022 sa;aa 5:05 pm Update tahe